Cudurka Jadeecada oo Seddex Caruur ah ku dilay Murcanyo – Radio Daljir
Cudurka Jadeecada oo Seddex Caruur ah ku dilay Murcanyo
Luulyo 8, 2015 8:18 b 0
Arbaco, Luuliyo 08, 2015 (Daljir) —Maamulka gobolka Gardafuu ee Puntland ayaa sheegay in cudurka jadeecadda oo ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolkaas uu ilaa hadda dilay seddex caruur ah ,kuwaasi oo uu soo ritay maalmihii la soo dhaafay.
Gudoomiyaha gobolkaas Cabduqaadir Yuusuf Maxamed oo lahadlay warbahinta ayaa sheegay in xanuunkan uu ka jiro deegaano hoostaga degmada Caluula ,isaga oo sheegay in ilaa iyo hadda ay jiraan caruur aan helin gar-gaar caafimaad.
“Walaal waxaa cudurkan uu labo caruur ah ku dilay deegaanka Murcanyo ,sababta waxaa weeye ma aysan helin gar-gaarkii ay u baahnaayeen “ ayuu yiri Cabdiqaadir Yuusuf oo sheegay in deegaano badan oo ka tirsan gobolkaas uusan ka jirin adeeg caafimaad.
“Mar aan booqday xarun lagu hayo caruurta xanuusan ,waxaan soo arkay 12 caruur oo la iil daran cudurka Jadeecada “ ayuu mar kale yiri masuulkan oo tilmaamay in dhibaatadan ay salka ku hayso talaal la’aan baahsan oo deegaanka ka jirta.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in uu xiriir la sameeyay wasaaradda caafimaadka Puntland si arintan wax looga qabto ,waxaana uu tilmaamay in ay sugayaan gawaari gar-gaar caafimaad sida oo gobolka ku soo fool leh.
Wiil Qaxootinimo ku soo bar-baaray oo Wasiir ka noqday Koonfurta Suudaan
Madaxweyne Gaas oo Madaxooyada kula shiray wasiiradii uu dhawaan magacaabay